Tsiva Wordpress Tsvaga neGoogle Tsvaga Kutsvaga | Martech Zone
Tsiva WordPress Tsvaga neGoogle Tsvaga Tsvaga
Muvhuro, September 15, 2008 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Ngatitarisei, WordPress Kutsvaga kunononoka uye kwakanyatsojeka. Nekutenda, Google iri kutsva nekukurumidza uye ichokwadi. Uye zvakare, Google's Google Custom Custom Search yakashanduka kuti isimbiswe mune yako blog (kana webhusaiti).
Permalinks uye Google Tsvaga Tsvaga
Kune saiti ine permalinks senge yangu, ini ndaifanirwa kuita imwezve yekushandurwa, zvakadaro. Ini ndaifanirwa kuita chiito mufomu tag tag pane kuendesa iyo yese URL ine duraini.
Google Tsvaga Kutsvaga ine chimwe chinhu chakanaka… ichadhonza iyo yakatarwa mufananidzo kana yako saiti iri kuishandisa uye iwe wakagadziridza misoro uchishandisa microdata zvinoenderana schema.org. Ini ndinoshandisa iyo Yoast WordPress SEO plugin kutora hanya nazvo - uye yangu saiti inogadziridzwa nemifananidzo yakaratidzwa kune yega yega posvo.
Gadzira Yekutsvaga Result Peji Template
Zvitsva zvekutsvaga: [Isa Kodhi yako yeKutsvaga yeGoogle Tsika Pano]
Zvino, iwe paunowedzera peji nyowani yemhedzisiro yako, sarudza iyi seye template:
Ini handizeze kuita izvi kune chero blog - kwete chete yekutsva inovandudzwa mukumhanya asi zvakare kune akakodzera mhedzisiro. Iwe unogona kutogadzira maviri emari padivi futi! Tarisa wega uye upe yangu nyowani Yekutsvaga fomu ye spin! Iwe haunganyadziswe!
Tags: google csegoogle cse chinyorwaGoogle +dingindiramakumi maviri nerimwemakumi maviri negumiWordpress cseWordpress google cse
Vhidhiyo: Seth Aizoitei?
5 Maitiro Ekutarisisa paWebhu
Sep 16, 2008 pa 12: 59 AM
Ndave neGoogle Tsvaga Tsvaga pablog rangu kwenguva yakareba ikozvino. Nekudaro, ini ndinochengeta zvese zviri zviviri sarudzo yakavhurika.